कहिले होला छोरीको समाज ? | Jwala Sandesh
| प्रकाशित मितिः आइतवार, अशोज २५, २०७७ ::: 12 पटक पढिएको |
गायत्री लम्साल-अचेल पत्रपत्रिका हेर्न निकै डर लाग्न थालेको छ। दिनदिनै महिला हिंसा अनि बलात्कारका खबर सुन्नै नसकिने। टुकुन–टुकुन हिँड्न थालेका अबोध बच्चीहरूलाई समेत बलात्कार गरेर मार्ने नरपशुहरू भएको कस्तो समाज निर्माण गरिरहेका छौं हामी ? घरभित्रै बलात्कार, आफन्तबाटै बलात्कार, जन्म दिने आफ्नै बाबुबाट बलात्कार हुन्छ भने कसरी बचाउने हामीले छोरीहरूलाई ? आफू जन्मेको घरमा र आफूलाई जन्म दिने जन्मदाताबाटै असुरक्षित भएपछि अब कहाँ जाने हाम्रा छोरीहरू सुरक्षा खोज्न ?
हामी गर्व गर्छौं; एक्काइसौं शताब्दीको मान्छे, निकै आधुनिक मान्छे, नयाँ प्रविधिलाई आत्मसात् गर्न सकेको निकै निपुण मान्छे। कता हिँडेको छ हाम्रो आधुनिकता, कहाँ हराउँदै छ हाम्रो संस्कार र सभ्यता ? मान्छे भएर मान्छेको परिभाषा कसरी दिने हाम्रा निच काम कुरा र व्यवहारहरूले ? कुनै पनि पशुले पशुका बच्चाबच्चीलाई बलात्कार गर्दैन। अशक्त र वृद्ध उमेरका स्त्री पशुहरूलाई बलात्कार गर्दैन। स्त्री पशुको इच्छाबिना कुनै पनि समयमा यौनक्रीडा हुँदैन। हामीलाई मान्छे भएर पशुको भन्दा नीच काम गर्न कसले सिकायो ?
बलात्कारका घटना भइसकेपछि उपचार खोज्नुभन्दा घटना हुनै नदिनु उपयुक्त हुन्छ। घटनालाई कुनै पनि हालतमा मिलापत्र हुन दिनु हुँदैन।
बलात्कारविरुद्धको शून्य सहनशीलतामा हामीहरू सबै आजबाटै लागिपरौं। गर्नसके सबै सम्भव छ। यही भावनाबाट सकारात्मक सोचविचारका साथ काम गर्न थालौं। निकट भविष्यमा बलात्कारजन्य आपराधिक क्रियाकलाप हुनेछैन। हुन दिनु हुँदैन भन्ने उच्च मनोबलका साथ हामी सबै लागिपर्‍यौं भने पक्कै पनि समाज सभ्य हुनेछ। आपराधिक क्रियाकलापबाट हाम्रो नयाँ पिँढी मुक्त हुनेछ। त्यति बेला समाज छोराहरूको मात्र होइन, छोराछोरी सबैको बराबरी हुनेछ।अन्नपूर्ण पोस्ट्बाट ।